Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uNorthern Freeway kwaba uRuth First Freeway – The Ulwazi Programme
Umgwaqo u-M4 Northern Freeway uhlanganisa iTheku namaphethelo asenyakatho ne-KZN North Coast (ngenkathi uM4 Southern Freeway uxhuma i-CBD nesikhumulo sezindiza i-Durban International kanye ne-KZN South Coast). Umgwaqo onguthelawayeka waseNyakatho wumgwaqo obalulekile osendleleni eya edolobheni futhi wagcina ukwenziwa ngcono ngo-2004. Isithombe ngakwesobunxele sikhombisa iDurban North ngawo-1930, kulokho okwakuzoba yiNorthern Freeway.
URuth First wazalelwa eGoli ngo-1925. Wajoyina iqembu lamaKhomanisi esafunda eWits University futhi waba ngunobhala weYoung Communist League. Ngo-1946 wajoyina i-Guardian Newspaper, eminyakeni engu-17 eyalandela, waba ngomunye wezintatheli ezazithuthuka kakhulu eNingizimu Afrika, ngokudalula izimo ezinesihluku zabasebenzi basemapulazini eBethal. Wabulawa yibhomu lencwadi ngo-1982.